Benefits of Gamification in Marketing - rangoon.tech
ခုတလော social media ပေါ်မှာ Wordle Game လေး viral ဖြစ်သွားကို မြင်ပြီးသွားကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်ဗျ။ ဒါ့ကြောင့် gamification ကနေရနိုင်တဲ့ Brand တွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ရှာပြီး list လုပ်ပေးပါရစေ။ Gamification ကနေရတဲ့ အကြီးမားဆုံး အကျိုးကျေးဇူးကတော့ Branded Game ဆော့ခြင်းဖြင့် audience တွေကို immersive, fun experience ကို ပေးနိုင်တာကြောင့် audience များအနေနဲ့ campaign မှတဆင့် Brand ကို ကြာကြာမှတ်မိစေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို experience ကောင်းကောင်းပေးပြီး brand နဲ့ customer ကြား emotional connection လုပ်ထားတာက audience တွေ စိတ်ထဲမှာ Brand Name ကို စွဲသွားစေပြီး ထိုသူတို့က product တွေကို ဝယ်ယူဖို့ ရွေးချယ်စဥ်းစားတဲ့အခါ ကိုယ့် Brand ကို အရင်ဆုံး သတိရမိစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Memorable Experience ကြောင့် Brand Recall ပိုမြင့်စေတာအပြင် Gamification ကြောင့် ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။
reward တွေကြောင့် Gamfication Campaign တွေမှာ engagement rate များဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ promising ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို audiene တွေအနေနဲ့ brand ကို engage လာလုပ်ခြင်းဟာ long-term relationship တစ်ခုကိုစလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
2. Makes the promotional offers more interesting
ကိုယ့်ရဲ့ product အသစ်ဖြစ်ဖြစ် အခြားသော incentive ပေးထားတဲ့ offer တွေကိုဖြစ်ဖြစ် လူပိုသိအောင်၊ ပိုစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်တဲ့ campaign တွေမှာလည်း Branded Game တွေကို ထည့်သွင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ Gamification ရဲ့ အနိုင်ရလိုစိတ်နဲ့ ဆုလက်ဆောင် တွေက ပုံမှန် ads တွေထက် customer တွေရဲ့ attention ကို ပိုရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
3. Helps to gather useful customer data
lead generation လုပ်ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ survey ကောက်ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် Game တွေရဲ့အဆုံးမှာ form ထည့်ပြီး customer data တွေကို generate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ rangoon.tech မှာဆိုရင်တော့ အဆိုပါ သက်ဆိုင်ရာ brand တွေက collect ထားတဲ့ data တွေကို brand တွေရဲ့ policy အတိုင်း တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
4. Generates User-generated Contents
Game မှာ engage လာလုပ်တဲ့ player တွေ ရောက်နေတဲ့ level တွေ၊ Worldle Game လိုမျိုး player တွေရလိုက်တဲ့ အဖြေတွေ၊ achievement တွေ၊ badge တွေ၊ prize တွေကို social media ပေါ် တိုက်ရိုက် share စေချင်ခြင်းဖြင့် မသိသေးတဲ့ သူတွေပါ သိသွားနိုင်တာမျိုးတွေ၊ viral ဖြစ်သွားနိုင်တာမျိုးတွေ စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
5. Increases conversion rates and traffic
Brand ရဲ့ အဓိက purpose က website(eCommerce) or physical store မှာ traffic တက်ရန်၊ product ပိုရောင်းရရန်အတွက် ဆိုရင်လည်း game ရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ coupon code တွေ discount တွေပေးပြီး ကိုယ့်ဆီကို customer ရောက်လာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ campaign objective နဲ့ ချိတ်ပြီး branding သက်သက် နဲ့ customer engagement တွေတက်လာအောင် reward တွေပေးမှာလား၊ sales တက်အောင် reward အဖြစ် coupon တွေပေးမှာလားဆိုတာကို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ ဘယ် social media platform ကိုမှ မမှီခိုဘဲ web-based gamification campaign တွေ run ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။ Gamification Solutions တွေအကြောင်းကို ဒီ မှာလည်း လေ့လာလို့ရပါတယ်။